နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Monkey and Mango : BamBuser
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:31 AM
khin oo may November 15, 2008 at 12:49 PM
Congratulations (မနာလိုဖြစ်စွာ ဖြင့်ြေ့ပာသွားသည်)
Ko Boyz November 15, 2008 at 12:51 PM
လုပ်ချင်ရင်ပြောပါ...။ အခမဲ့လုပ်ပေးပါမည်...။ ပိုက်ပိုက်ကုန်မည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ (အရင်ဖလင်ခေတ်တုန်းကတော့ ကြည့်လို့မရတဲ့သူ၊ အမြင်ကတ်တဲ့သူတွေ၊ ယောက်ဖတွေကို ကင်မရာ ၀ယ်ပေးတယ်ဆိုလား...။) ဟီးဟီး
:P November 15, 2008 at 1:54 PM
သို့သော်..Bambuser ဆော့ဖ်ဝဲ အကြောင်းစာပိုဒ်မှာ လဘော့ဂ်ဟူသောစကားလုံးတွေ့ရသဖြင့် ခေါင်းစားသွားပါသည်။
" လဘော့ဂ်ပေါ်မှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ ရောင်းရင်း၊ အပေါင်းအသင်း " စသဖြင့်.......
မိမိမှာ ပညာရှိဖြစ်သဖြင့် ဘလော့ဂ်ဟု ရေးရာမှ ဘ နဲ့ လ ပြောင်းပြန် type
Ko Boyz November 15, 2008 at 2:05 PM
တစ်ချို့တွေက အကြောင်းရပ်ကိုသာ စိတ်ဝင်စားတတ်ပြီး စာလုံးပေါင်း၊ သတ်ပုံကို သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်တတ်ပဲ ဖတ်နိုင်/တတ်လို့ပါ...။ ဥပမာ - အမ်းမား...။
Moe Cho Thinn November 15, 2008 at 11:30 PM
PAUK November 15, 2008 at 11:56 PM
Ko Boyz November 16, 2008 at 1:12 AM
မိုးချိုသင်း - တော်တာ မဟုတ်ပါ...။ သူများ အသင့် ခူးပြီသားကို ပါးစပ်ထဲ ၀ါးမခွံ့ရုံတစ်မယ် သုံးတတ်တဲ့သူပါ...။ တစ်ခုခုကို သေချာလေး ဖတ်လိုကရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မမိုးချိုသင်းက concentration သာ မထားတာ...။ သေချာလေး concentration ထားလိုက်ရင် ပေါက်မယ့် အနေအထားပါ။ (ထီး မဟုတ် ဟီး...။) You juz need to putalittle effort and concentration. ခုတောင် ကားမောင်းတာ အဆင်ပြေနေပြီ မဟုတ်လားဗျာ...။ တစ်ပြည်သူ အစ်မ ညီမများကို အနှောင့်အယှက် ပေးစရာ မလိုပဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကို မောင်းတတ်နေပြီ မဟုတ်လား...။
ကိုပေါက် - ကျွန်တော်က ဇော်ဂျီခေတ်ဦးက ဖွန့်တွေပါ ထည့်ထားတော့ (Zawgyi Adobe font) ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားတာ နေမှာ...။ နောက်များကို ဆင်ခြင်ပါ့မယ်...။ အဲဒီ ဖွန့်ကို ဖြုတ်ချလိုက်ရင် ဖွန့်အဟောင်းသုံးတဲ့သူတွေက ကျွန်တော့်ပို့စ်တွေကို ဖတ်လို့ မရတော့ဘူးဗျ...။ If possible , install the old font of zawgyi in yr system, then u can read all post in my blog. Btw, Thnx to visiting my blog.
မီယာ November 16, 2008 at 1:38 AM
Ko Boyz November 16, 2008 at 2:03 AM
ဟုတ်...။ လိုက်ဖ်ပြတာကတော့ ခုနက ဗွီဗို စီးတီးရောက်တုန်း ရိုက်ထားတာတွေ လွင့်ပြလိုက်သေးတယ်...။ (ေ-ာက်ကျိုးနည်း ကုန်လိုက်မဲ့ ဒေတာယူ့ဆေ့ခ်ျ) ကြည့်ဖြစ်ကြသလားတော့ မသိဘူးရယ်....။
အချိန်မှီ အကြောင်းမကြားလိုက်မိဘူး...။ စတားဟပ်ကနေ မိုဘိုင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ဝင်တာ အဆင်မပြေဘူးရယ်....။
khin oo may November 16, 2008 at 4:29 PM
khin oo may November 16, 2008 at 4:33 PM
Live ကိုနောက်ကျစွာ ကြည့်သွားပါသည်။ မှောင်ကြီးမဲကြီးတွင် အားစိုက်ရွေ့ကြည့်ရာ အရက်ပုလင်း ဟု ထင်ရဟန်တူသော (အသံနောက်ခံမှ အရက်ပုလင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ) and then မော်တော်ကားလမ်းမ။ မီးလုံးတလုံး ။မော်တော်ကားအချိူ့ ။ ဟု ဆုံးဖြတ်နိုင်သော အရိပ် အချိူ့ကို မြင်ရသည်။
မိတ်ဆွေရင်း စေတနာနှင့် ဖျစ်တောက် ဖျစိတောက် ပြော ရသော် အသင်သည် သေရက် များသောက် သုံးခြင်းကို လျှော့ရန်.။ ယခုပင် အရက်သမားဟု နာမည် ပျက်နေသည် က တ ကြောင်း။ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ နေထိုင် စားသောက်ခြင်းကိုလည်း ဘလော့ဖတ်ရာ မှ ထောက်လှမ်း ရရှိရွေ ရုံ မျှ မက ပတ်ဝန်းကျင် ၏ ထောက်ခံချက် ကလည်း ပံ့ပိုးထားရာ သင့်ရှေ့ရေးမှာ စိတ် မအေးဘွယ်ရာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
ယခု တဖန် ဖိုရမ် များတွင်လည်း ဝေဖန် လေကန်။ ဘလော့ရေးရုံမျံမက ဘလော့တွင် Live ပြခြင်းကိုလည်း ပိုက်ပိုက်ကို ရေသဘွယ် သင် သုံးနေသည်မှာ လကုန် တွင် တယ်လီဖုံးဘီလ် မြင်ပြီးသကာလ မေ့လဲ သွားလျှင် နှာနျပ် ရန် မလို။ သင့်ထိုက်နှင့်သင့်ကံသာ.....ရှိပေတော့ သတည်း။
Ko Boyz November 16, 2008 at 4:49 PM
အရှည်ကြီး ပြန်ပေးတာ ကော်နက်ရှင် ပြုတ်ကျသွားတော့ ပလုံသွားပြီ...။
ပြောချင်တာကတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတာပါ...။
ခင်မင်းဇော် November 18, 2008 at 3:36 AM
ဘွိုက် အဲလို တိုက်ရိုက်လွှင့်လို့ရတာ နောက်တနေရာ ရှိသေးတယ်ကွ..
qik.com မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါဦး..